Myanmar becomes the 171st State Party to the BWC – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar becomes the 171st State Party to the BWC
U Thant Kyaw, Deputy Minister for Foreign Affairs attending the Meeting of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (BWC), deposited Myanmar’s Instrument of Ratification on the BWC with the representatives of the Depositary States, namely, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, on 1 December 2014.
In the forenoon session of the Meeting of States Parties to the BWC on4December 2014, Chairman Ambassador Urs Schmid of Switzerland announced that Myanmar had becomeaState Party to the Convention effective 1 December 2014. The delegations of the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, as Depositary States, welcomed Myanmar asanew State Party to the Convention. Deputy Minister U Thant Kyaw thanked to the member states, particularly the Depositary States and the Chair for the announcement and also expressed Myanmar’s readiness to work with fellow States Parties to further strengthen the effectiveness of the BWC.
Myanmar has now become the 171st State Party to the BWC with effect from 1 December 2014.
Dated:5December 2014
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် (၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ (၅-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သည့် ဇီ၀လက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ကျော် သည် ဇီဝလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် Instrument of Ratification အား စာချုပ်ထိန်းသိမ်းသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သော ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ (၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဇီဝလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အစည်းအဝေး၏ (၄-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် (၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဇီဝလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေး သဘာပတိဖြစ်သူ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး အုစ် ရှမစ်ဒ် က ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့နောက်၊ စာချုပ်များထိန်းသိမ်းသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သော ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ကိုယ်စားလှယ်များက မြန်မာနိုင်ငံအား ကြိုဆိုကြောင်း မိန့်ခွန်းအသီးသီး ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ကျော်က ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုခိုင်မာမှုရှိစေရန် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသည့် အချက်များ ပါဝင်သည့် မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသည် (၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဇီဝလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင် ရေးစာချုပ်၏ (၁၇၁) နိုင်ငံမြောက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်